Anabolic steroids powder, anabolic-androgenic steroids (AAS), inogadzirwa zvakasiyana-siyana zvehutachiona hwebonde testosterone. Izwi rakakodzera remakemikari aya ndi anabolic-androgenic steroids. "Anabolic" inoreva musimba wekuvaka, uye "androgenic" inoreva kuwedzera kwehukama hwepabonde. Mamwe mazita anozivikanwa eAnabolic steroid powder ndiwo Gear, Juice, Roids, uye Stackers.
Vamwe vanhu vanoshatisa Anabolic steroids powder kuvandudza mararamiro avo.
Vatapi vezvoutano vanogona kupa steroid kuti vabate nyaya dzemahomoni, dzakadai sokunonoka pakuyaruka. Steroid inogonawo kubata zvirwere zvinokonzera kushungurudzika kwemasimba, zvakadai sekenza neAIDS. Asi vamwe vatambi uye vanogadzira muviri vanoshandisa zvinodhaka izvi kuti vawedzere kushanda kana kuvandudza mararamiro avo.
Njodzi dzeutano dzinogona kubudiswa nekushandiswa kwenguva refu kana kuwedzerwa kweAAS. Izvi zvinosanganisira kuchinja kunokonzerwa nehushuterolol (zvakanyanya kuderedza lipoprotein uye kuderera kwepamusoro-density lipoprotein), mashevha, kukwirira kweropa, kuora kwechiropa (kunyanya neinonyanya kutaura muromo weAAS), uye kuchinja kwekutyisa muhutano hwemhepo yakasara ye ventricle moyo. Mitemo ine chokuita nekusaenzana kwemahomoni yakadai segynecomastia uye testicular kukura kwekuwanda inogona kuve nekukonzerwa neAAS. Madzimai nevana, AAS inogona kukonzera kusagadziriswa kwemasimba.
Ergogenic inoshandisa AAS mumitambo, kumhanya, uye kuvaka muviri semishonga inobatsira-kukurudzira inokakavadzana pamusana pemigumisiro yavo yakaipa uye iyo inogona kuwana mukana usina kunaka mumakwikwi emumuviri. Kushandiswa kwavo kunonzi kunonzi doping uye kunorambidzwa nemitambo mizhinji yemitambo. Kwemakore akawanda, AAS yakave yakanyanya kunowanikwa doping zvinhu muIOC-mabhakirati anogamuchirwa. Munyika umo AAS inotariswa zvinhu, pane kazhinji misika yakasvibiswa iyo yakasvibiswa nechisimbe, inonyadzisira yakagadzirwa kana kunyange mishonga inonyengedza inotengeswa kuvashandisi.
Vazhinji vashandisi veSteroid havasi vatambi. Pakati pe 1 mamiriyoni uye 3 vanhu vane mamiriyoni (1% yevanhu) vanofungidzirwa kuti vakashandisa AAS muUnited States. Zvidzidzo muUnited States zvakaratidza kuti vashandisi veAAS vanowanzove vari pakati nepakati-mapoka evanhu vanoita zvepabonde vane makore anopfuura makumi emakore evanhu vane 25 avo vasiri vemuviri vomuviri uye vasiri vateereri uye vanoshandisa zvinodhaka zvezvipfeko. "Pakati peCNUMX- kusvika kuAIDS, vane steroids nemishonga yakafanana vakakwira 12 muzana kubva ku17 kusvika ku25, pamwe ne1999 pavanoti vanoshandisa maitiro panzvimbo yemitambo, chidzidzo chebhaini re Blue Cross Blue Shield rakawanikwa." (Eisenhauer) Chimwe chidzidzo chakawana kuti kusashandiswa kwechiremba kweAAS pakati pevadzidzi vekoroji kwaive kana kuti kudarika 2000%. Maererano nekuongororwa kwechangobva kuitwa, 20% yevashandi veSteroid vakanga vasingagoni kugadzirisa muviri uye vasati varoti, asi neavo 1% vakarondedzera kusachengetedzwa kwakachengeteka maitiro sekushandisazve masero, kugovana masero, uye kugoverana michina yakawanda, kunyange zvazvo kuongorora kwe78.4 kwakawana kuti kugovana kwemasero zvisingawanzoitiki pakati pevanhu vanoshandisa AAS nekuda kwechikonzero chekurapa, pasi pe13%. Chimwe chiongorori cheChNUMX chakawana kuti 2007% yevasingashandisi vashandi veAAS yezvokurapa vaiva nedhigirii rekondari uye vamwe vakanga vapedza chikoro uye vashomanana vakakundikana kupedzisa chikoro chepamusoro kupfuura chinotarisirwa kubva kuvanhu vose. Chidzidzo ichocho chakawana kuti vanhu vanoshandisa AAS nekuda kwechikonzero chekurapa vaiva nehuwandu hwekushanda kwepamusoro uye mari yepamusoro yepfuma kupfuura yevoruzhinji. Vashandi veAAS vanowanzotsvakurudza mishonga yavavari kutora kupfuura vamwe vanogadzirisa-vanoshandisa zvinhu; kunyange zvakadaro, mazano makuru anobvunzwa nevashandisi veSteroid vanosanganisira shamwari, kwete mabhuku ezvokurapa, internet-based forum, blogs, uye fitness magazini, izvo zvinogona kupa mashoko asina chokwadi kana asina kururama.
Vanhu vanoshandisa sei zvisina kunaka Anabolic steroids powder?
Vanhu vanoshungurudza Anabolic steroids powder kazhinji vanovatora mumuromo kana kuvakuisa mumisungo. Izvozvo zvinogona kunge zviri 10 kusvika ku100 nguva dzakakwirira kudarika mishonga inorayirwa kuti irape zvirwere zvoutano. Steroid inoshandiswawo kune ganda se kirimu, gel, kana patch.
Vamwe vatambi uye vamwe vanoshungurudza steroid vanodavira kuti vanogona kudzivisa zvisingabatsiri zvikanganiso kana kuwedzera mishonga yezvinodhaka kuburikidza nekuvatora nenzira dzinosanganisira:
mabhasikoro-kutora doses kwenguva yakati, kumira kwechinguva, uyezve kutangazve
kuvhara-kuunganidza maviri kana kupfuura mamwe marudzi akasiyana e-steroids
piramiidhi-kuwedzera zvishoma nezvishoma chirwere kana kuti nguva yakawanda yekudzvinyirirwa, kusvika purogiramu yakakura, uye zvishoma nezvishoma kuwedzera
Anabolic-androgenic steroids (AAS) inoshandiswa shanduro dzezvinoitika pane hormone testosterone uye dzinoshandiswa nehutano hwepamutemo. Apo inorayirwa zviri pamutemo uye inotarisirwa nemumwe mushandi wezvokurapa, Anabolic steroids powder inonzi inofanirwa uye inorapwa mishonga.
Zvisinei, ruzhinji rwekushandisa kwemishonga iyi ndevamwe vekuvaka muviri nevatambi kuitira kuti vawedzere simba ravo musimba kana kuonekwa. Kushatiswa kwakanyanya kweAAS kunogona kutungamirira kune zvinogona kuipa uye dzimwe nguva zvisingabviri kusinganzwisisiki zvehutano, kusanganisira kutanga kwepfungwa yepfungwa, kurohwa, kuora mwoyo uye unhu hwehasha.
Edza kushandisa maAAS kubva kumakambani akakodzera zvinoreva kutora mhando yakanaka yeAAS tablet, kubika tablet yeAAS / capsule kana mafuta injected pasi pemamiriro akaoma achaunza utano hwako husina ngozi.
Achiratidza 1-8 pamusoro 46 zvabuda